China kuUnited States-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Imba>Mutsetse Webasa>North America Iine>China kuUnited States
Kuendesa kubva kuChina kuenda kuUSA
Mazhinji evatengi vedu akavakirwa muUSA, saka zvave iri musika wakakosha kwazvo kwatiri. Takanyorerana chibvumirano neari kutakura akadai seCOSCO, OOCL, APL, EMC, MSK, uye HMM. Hukama uhwu ngatirege isu kukupa iwe huwandu hwakanaka kwazvo hwekutakura kana uchiendesa kubva kuChina kuenda kune chero chiteshi muUSA.
NeSHL sevakabatana, kutumira zvinhu kubva kuChina kuenda kuUSA zvichave nyore, iwe uchangoda kusiyira zvinhu zvako nesu, uye isu tichaita zvimwe. SHL inotarisira kuva yako yepamberi yekutakura zvinhu kubva kuChina kuenda kuUSA. Bvunza mutengo uri nani izvozvi.
Ro-Ro / Kupwanya Bulk Kutumira kubva kuChina kuenda kuUS
SHL inogona kupa RORO ROROMAFI BREAKBULK yeicho chaiyo michina, mota uye zvinorema michina kubva China kuenda kuUS Tinogona kupa imwe kumira uye yakagadzirirwa mhinduro.
Kutakura Gungwa Kutakura kubva kuChina kuenda kuUSA
Kutakura Mhepo Kutakura kubva kuChina kuenda kuUSA
Kuchipa Kukutakura kunobva kuChina kuenda kuUS
Izvi zvinoenderana nemidziyo mizhinji yaunotumira kubva kuChina kuenda kuUS, ukasakurumidza nesampuleti diki, unogona kushandisa China Post kana kutaura senge DHL, kana uine zvimwe zvinhu, wozosangana neBansar, iwe unowana yedu yekufambisa yakanaka chiyero kubva kuChina kuenda kuUS.
Yakareba / Yakadii Kutakura kubva kuChina kuenda kuUS
Door to Door Shipping kubva kuChina kuenda kuUSA
Yako Yakanakisa Yekutakura Forwarder kubva kuChina kuenda kuUSA
Ipa makwikwi emakungwa nemhepo kutakura zvinhu kubva kuChina kuenda kuUSA.
Main Airports muUSA
Kune nhandare dzinoverengeka muUSA dzinogamuchira zvinotakura kubva kuChina.
Mune ino chinyorwa, isu tichafukidza gumi chete makuru uye akabatikana pane aya enhandare.
Ndokumbira utarise; idzi nhandare dzendege dzinosimudzira kumusoro nezvezvivakwa zvezvitoro, masikirwo uye kugona kubata.
Kazhinji, ivo nhandare yendege iyo ichave nehanya kwakanyanya kutarisirwa kwako kunze.
Memphis International Airport iri uye yave kwenguva refu iyo inonyanya kubhururuka nendege munyika nezvekutakura zvinhu kuburikidza nezvimiro.
Asi izvo, muna 2015 chete, Memphis ndege yendege yenyika yakabata matani emamirioni zviuru zvina nemazana manonwe.
Ziva kuti nhandare yendege inokwira nechitima, mugwagwa, kumhanya, uye rwizi inobvumira kufamba kuri nyore kwekutakura zvinhu kubva uye kunhandare yendege.
Anchorage airport iri muAlaska.
Ndiyo airport imwe chete inobata zvinhu zvakawanda zvinotakura kuburikidza nePacific kuenda kuUS.
Iwe unofanirwa kuziva kuti iyi nhandare yendege ine mashoma emigwagwa.
Muchokwadi, mazhinji enharaunda mukati meAlaska nzvimbo dziri kure nemugwagwa nzira.
Saka nekudaro, chero chinopinda kuUS kuburikidza neanternet airport chinofanirwa kuendeswa nendege diki kunzvimbo dzenharaunda dziri muAlaska.
Louisville International Airport, Kentucky ndeimwe yenzvimbo dzinozivikanwa dzenhandare dzenyika uye imwe yehukuru uye inonyanya kubata muUS.
Ndege yacho sepana 2015 yakanga yaibata anopfuura mabhiriyoni mashanu emapaunzi echitakuri zviri zviviri mukutakura uye mail.
Cargo tonnage muna 2015 chete yakamira pamamiriyoni mazana maviri ematani.
Murefu yezvivakwa uye masikirwo, eLouisville airport ndiyo yakakura kwazvo yakazara nyika inotakura zvinhu inotakura nzvimbo.
Nhandare yendege ine maitiro eIT maitiro ayo anotendera kuti kutakura zvinhu kujekeswe uye kugoverwa nekukurumidza.
Iyo Los Angeles International Airport inowanzonzi LAX zvichienderana neIATA kodhi.
Ndiyo nendege huru inoshandira Los Angeles nenharaunda yakapoterera yeCalifornia, USA.
Ziva kuti LAX inhandare yendege iri mune vese vari kutakura uye kutakura zvinhu.
Yakapiwa zita rechitanhatu kubatikana nendege munyika muna 6 uye wechina kubatikana muna 2010.
Nhandare iyi inowanikwa kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweWestchester guta iri makiromita gumi nemasere kubva pasi peguta LA.
Iyo Miami International Airport inoonekwa seimwe yenzvimbo dzinotakura vanhu panhandare dzendege.
Nhandare yendege iri pasi pekutungamirwa kwedhipatimendi rekubhururuka kweMiami.
Muviri mumwe chetewo unoshanda nawo.
Maererano nemishumo, iyi nhandare yendege inotakura akawanda eUnited States mizhinji kubva kumatunhu pasi rese.
Vanopfuura makumi mapfumbamwe vatakuri vekutakura zvinhu vanoshandisa ndege dzezuva nezuva pakati peMiami airport uye dzimwe nhandare dzenyika.
Izvi zvinosanganisira; Asiana ndege, Cargolux, FedEx kuratidza, China ndege pakati pevamwe vazhinji.
Parizvino, ndege dzinoshanda neChicago International Airport ndeChina China, China Airlines, neChina zvinotakura.
Dzimwe ndege dzinoshanda nendege ndiAir China, Cargolux, Eva mweya, QANTAS, uye Yangtze River Express.
Dzese idzi nendege dzinoshanda dzese kwevanopinza / vatengesi kune uye kubva kuChina.
Iyo airport Airport inozivikanwawo seO'Hare International airport, saka usavhiringidzwa iwe paunosangana neizvi.
Iyo JF Kennedy International Airport sezvavanowanzozivikanwa iri mune County yeQueens, New York.
Ndiyo huru kune matatu makuru enhandare dzenyika anoenderana neNew York metropolitan airport system.
Iyi nhandare yendege, tarisa, iri pamakiromita gumi nematanhatu kubva pakati peguta reManhattan.
Iyo ndege yeJFK ndiyo yechitatu yebhazi inotakura zvinhu kuenda kuUSA uye yekutanga mune yekune dzimwe nyika inotakura zvinhu.
Anenge zana ndege dzakasiyana siyana dzave nemaitiro kunze kweJFK International.
Izvi zvinosanganisira; Asia, Air China, Eva, Cargolux, Cathay Pacific, Nippon, Emirates, FedEx, DHL, UPS uye zvimwe zvakawanda.
Indianapolis International Airport inhandare yendege yevashandi uye inoshanda neIndiana polis airport airport.
Iyo airport iri kumusha kune FedEx yechipiri yakakura hub mushure meiyo inowanikwa kune Memphis International airport.
Kugara 3116 ha yevhu yakaoma, iyo Indiana polis airport ndeyende kure nendege nendege iri mudunhu reIndiana.
Atlanta International Airport iri mune Georgia, Atlanta USA.
Ndiwo muyaniso bhizinesi renhandare yendege munyika yese.
Iyo airport ndiyo yakakura yekumaodzanyemba US hub kune iyo nyika yese.
Yakawanda inobatanidza uye ndege dzepasi rose dzinopfuura neATL vasati vabva kune kwavo kwekupedzisira.
Iyo inoshanda segedhi rakakura rekubhururuka kune dzimwe nyika kuenda uye kubva kuAsia uye mamwe matunhu pasi rose.
Iyi nhandare yendege iri pakati peguta reDallas neFort Worth, Texas.
Iyo nhandare inofungidzirwa kuti ndiyo inonyanya kubhururuka terminal munzvimbo yese yeDallas.
Ichowo chikamu chechina chinotyisa muairport mukufunga nezvekutiza kwemotokari.
Pamusoro pehukuru, DFW inozvirumbidza yechipiri yakakura yekumhanya muU.S. (iko kuseri kweDenver International).
Webhusaiti yeCBP https://www.cbp.gov/ ine ruzivo rwakawanda nezvetsika dzeUS uye basa.